China umatshini wokupakisha ozenzekelayo wase China china abavelisi kunye nabathengisi | oomatshini beShipu
Lo matshini ugqibezela yonke inkqubo yokupakisha yokulinganisa, ukulayisha izinto, ukugoba, ukushicilela umhla, ukutshaja (ukudinisa) kunye neemveliso ezithutha ngokuzenzekelayo kunye nokubala.inokusetyenziswa kumgubo kunye nezinto eziyimbumbulu.njengobisi olungumgubo, iAlbumen powder, isiselo esiqinileyo iswekile emhlophe, i-dextrose, umgubo wekofu, umgubo wesondlo, ukutya okutyetyisiweyo njalo njalo.
Intshukumo yokuqhutywa kwefilimu eqhutywa yiServo/ Ukuqhuba kwe-Servo yokondla ifilimu
Ibhanti yexesha eliqhutywa yi-servo inokuloyisa ngcono i-inertia yebhanti kunye nobunzima, kwaye ibhanti litsalwa ngokugudileyo nangokuchanekileyo, liqinisekisa ubomi benkonzo ende kunye nozinzo olukhulu ekusebenzeni.
Ibhanti e-synchronous yi-servo drive ibhetele ngakumbi ukunqanda i-inertia, qiniseka ukuba ukondla ifilimu ukuba ichane ngakumbi, kwaye isebenze ubomi obude kunye nokusebenza ngokuthe ngcembe.
I-PLCInkqubo yoLawulo/ Inkqubo yolawulo lwePLC
Ukugcinwa kwenkqubo kunye nemisebenzi yokubuyisa.
Ivenkile yenkqubo kunye nomsebenzi wokukhangela.
Phantse zonke iiparameter zokusebenza (ezinje ngobude befilimu, ixesha lokutywina kunye nesantya) zingenziwa ngokwezifiso, zigcinwe kwaye zikhunjulwe.
Phantse yonke iparameter yokusebenza (enje ngobude besondlo, ixesha lokutywina kunye nesantya) inokuhlengahlengiswa, igcinwe kunye nobizo.
Chukumisa ujongano lwescreenHMI
7Inch touch screen, iphepha lokusebenza lilula kwaye kulula ukuyisebenzisa.
7 intshi touch screen, inkqubo yokusebenza lula.
Ukubonakaliswa kwenkqubo yokusebenza komsingathi: ukutywina iqondo lobushushu, isantya semveliso, ukuvulwa kwebhanti eyoluliweyo, isivusi, ukubala kwebhegi kunye nokukhethwa kwemisebenzi ephambili, enje ngokusebenza ngesandla, imowudi yovavanyo, ixesha kunye nokuseta ipharamitha.
Umsebenzi ubonakala ngokutywina iqondo lobushushu, isantya sokupakisha, imeko yokondla ifilimu, ialam, ukubalwa kweengxowa kunye neminye imisebenzi ephambili, enje ngokusebenza ngesandla, imowudi yovavanyo, ixesha kunye nokuseta kweparameter.
Ishelfu yefilimu Ukondla ifilimu
Ifilimu evulekileyo yokuphelisa umsila ine-photoelectric enemibala, kwaye ixhotywe ngenjini yokulungisa ngokuzenzekelayo indawo yokuqengqeleka kwefilimu (ulungiso) ukuqinisekisa ukuba uluhlu lwefilimu luyahambelana nendawo yangoku kunye netywina lobude, ukunciphisa inkunkuma, kwaye akukho sidingo sokuvula itywina longitudinal ngexesha lenkqubo yokulungisa.Ingalonga ngokufanelekileyo ixesha lokusebenza.
Vula ifreyimu yokondla ifilimu ngombala wombala wefoto-yombane, umsebenzi wokulungisa ngokuzenzekelayo ukuqinisekisa ukuba ifilimu esongwayo, ukwenza ityhubhu kunye nokutywina nkqo kumgca ofanayo, ukunciphisa inkunkuma yezinto ezibonakalayo.Akukho sidingo sokuvula ukutywina nkqo xa kulungiswa ukugcina ixesha lokusebenza.
Umenzi wengxowa (ngaphambili)Ndiyila ityhubhu
Isiqwenga esinye sokuguqula ubungakanani besikhwama ngokukhawuleza nangokulula.
Kugqityiwe iseti yokwenza ityhubhu yotshintsho olulula nolukhawulezayo.
Ukulandelela ubude beengxowa ngokuzenzekelayo Ingxowa yokulandelela ngokuzenzekelayo
Ikhowudi yombala ye-photoelectric sensor okanye i-encoder ilandelela ngokuzenzekelayo kwaye irekhode ubude bengxowa, ukuze ukuchaneka kokutsala kwefilimu nganye kufane nobude obumiselweyo.
Isivamvo sophawu lombala okanye isifaki khowudi sokulandela umkhondo kunye nokurekhoda ubude, qiniseka ukuba ubude bokondla buya kuhambelana nobude bokuseta.
Umatshini wokufaka iikhowudi oshushu Umatshini wokufaka iikhowudi ngobushushu
Umshicileli oshushu uprinta ngokuzenzekelayo iibhetshi zomhla.
Ubushushu bokufaka iikhowudi kumatshini wokufaka iikhowudi ngokuzenzekelayo kumhla nakwibhetshi.
Alarm kunye nezicwangciso zokhuseleko Isivusi kunye nokhuseleko
Vula umnyango uyeke, akukho bhanyabhanya, akukho ribhoni, i-alamu yokubamba izinto kunye nokuyeka, qinisekisa ngokupheleleyo ukhuseleko lomqhubi;
Ukumiswa komatshini ngokuzenzekelayo xa kuvulwe umnyango, akukho bhanyabhanya, akukho khowudi ikhowudi kunye nokunye, ukuqinisekisa ukhuseleko lomqhubi.
Kulula ukuyisebenzisa Umsebenzi olula
Lo matshini ungangqanyaniswa kunye neenkqubo ezinobunzima kunye neemitha.
Umatshini unokutshatisa uninzi lwebhalansi kunye nenkqubo yokulinganisa.
Izinto ezinokunxitywa zinokutshintshwa ngokulula nangokukhawuleza.
Kulula kwaye kuyakhawuleza ukutshintsha iinxalenye zokunxiba.
Idatha ephambili yezobugcisa
Ububanzi befayile yesicelo
I-140 ~ 420mm
Ingxowa yokwenza ububanzi
I-50 ~ 250mm, ukutsala ifilimu enye
Uluhlu lokugcwalisa* 1
Isantya sokupakisha* 2
20 ~ 40bpm kwi-PP
Malunga. 480 kg
Isixhobo sokuzoba imephu
Egqithileyo Umthamo wobisi wobisi unakho ukuhambisa amagumbi china manufacturer
Okulandelayo: Oluzenzekelayo Potato Chips Packaging Machine SPGP-5000D / 5000B / 7300B / 1100
Umatshini we-albenen wokupakisha umgubo
coffee umgubo ukupakisha umatshini
ubisi olungumgubo wokupakisha umatshini
umatshini wokupakisha ityuwa
umatshini wokupakisha iswekile
umgubo ingqolowa umatshini ukupakisha
Oluzenzekelayo Packaging Machine Model SPLP-7 ...
Zenzekelayo Ubunzima & Packaging Machine Mod ...
Oluzenzekelayo Ukuzalisa Ukupakisha Machine Model ...
Zenzekelayo Potato Chips Packaging Machine SPGP-5 ...
Rotary Pre-ezenziwe Bag Packaging Machine Model SPR ...
© Copyright-2010-2021: Onke amalungelo agciniwe.